Ịga Chọọchị Ọ̀ Ka Na-amasị Ndị Mmadụ?
Gịnị Na-akpata Esemokwu n’Ezinụlọ?
TETA! Nke 1 n'Afọ 2016
Okpukpe dị iche iche nwere ihe ndị ha na-akụzi gbasara mkpụrụ obi na ihe na-eme mmadụ mgbe ọ nwụrụ. Ma Baịbụl ga-enyere anyị aka ịmata nke bụ́ eziokwu.
Ọtụtụ ndị taa na-ekwu na mkpụrụ obi anaghị anwụ anwụ. Ụfọdụ ndị na-ekwukwa na ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ya alọ ụwa. Ọ bụrụkwa na ọ nwụọ n’ụwa ahụ ọ lọrọ, ya alọkwa ọzọ. E nwekwara ndị na-ekwu na mmadụ nwụọ, mkpụrụ obi ya agawa eluigwe ma ọ bụ ọkụ mmụọ.
Baịbụl kwuru ihe ndị gosiri na mkpụrụ obi na-anwụ anwụ. N’akwụkwọ Ezikiel, Chineke kwuru na mkpụrụ obi na-eme mmehie ga-anwụ. N’ebe ọzọ na Baịbụl, a kpọrọ onye nwụrụ anwụ ‘mkpụrụ obi nwụrụ anwụ.’ (Levitikọs 21:11) Ihe a niile Baịbụl kwuru gosiri na mkpụrụ obi na-anwụ anwụ.
“Mkpụrụ obi ọ bụla nke na-emehie, ọ bụ ya ga-anwụ.”—Ezikiel 18:20.
Mkpụrụ obi ọ̀ bụ ihe dị n’ime mmadụ?
Ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ mkpụrụ obi na-eme ka mmadụ dịrị ndụ nakwa na ọ na-esi n’ahụ́ mmadụ apụ ma onye ahụ nwụọ.
Jenesis isi iri anọ na isii, amaokwu nke iri na asatọ kpọrọ ụmụ otu nwaanyị mụrụ “mkpụrụ obi.” Na Baịbụl, okwu Hibru e si sụgharịta okwu ahụ bụ́ mkpụrụ obi nwere ike ịpụta onye na-eku ume. Baịbụl kpọrọ ụmụ anụmanụ mkpụrụ obi, kwuokwa na agụụ na-agụ mkpụrụ obi. (Diuterọnọmi 12:20) A sị na mkpụrụ obi abụghị mmadụ n’onwe ya, Baịbụl ọ̀ gaara ekwu na ọ na-eku ume ma ọ̀ bụ na-eri nri? Baịbụl na-ejikarị okwu ahụ bụ́ mkpụrụ obi akọwa onye dị ndụ.
‘Ọ mụrụ mkpụrụ obi iri na isii.’—Jenesis 46:18.
Gịnị na-eme mkpụrụ obi ma ọ nwụọ?
Baịbụl kwuru na “ọrụ ma ọ bụ ichepụta ihe ma ọ bụ ihe ọmụma ma ọ bụ amamihe adịghị na Shiol,” ya bụ n’ili. Ihe a o kwuru pụtara na onye nwụrụ anwụ anwụọla. (Ekliziastis 9:10) Mmadụ nwụọ, ọ “laghachi n’ala o si pụta; n’ụbọchị ahụ, echiche ya na-ala n’iyi.” (Abụ Ọma 146:4) Onye nwụrụ anwụ anaghị emegharị ahụ́. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji jiri onye nwụrụ anwụ tụnyere onye nọ n’ụra.—Matiu 9:24.
Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ndị nke ya nwere ike ịna-ajụ, sị: Ebee ka ọ nọ? Gịnị na-eme ya ugbu a? Ọ̀ na-ata ahụhụ? Ebe ọ bụ na Baịbụl ekwuola na onye nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla, obi kwesịrị isi anyị ike na onye nke anyị nwụrụ anwụ anaghị ata ahụhụ ọ bụla. Ihe kwesịrị ịkacha na-eme anyị obi ụtọ bụ na Jehova kwere anyị nkwa na ọ ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọdịnihu.—Aịzaya 26:19.
“Ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla ma ọlị.”—Ekliziastis 9:5.
Ọtụtụ ndị kweere na Chineke na-ata ndị mmehie ahụhụ ebighị ebi. Chineke ọ̀ na-eme ihe na-adịghị mma? Gịnị na-eme ndị mmadụ ma ha nwụọ?
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Mkpụrụ Obi?
mailto:?body=Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Mkpụrụ Obi?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102015449%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Mkpụrụ Obi?
Nke 1 n'Afọ 2016 Ịga Chọọchị Ọ̀ Ka Na-amasị Ndị Mmadụ?
mailto:?body=Nke 1 n'Afọ 2016 Ịga Chọọchị Ọ̀ Ka Na-amasị Ndị Mmadụ?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dg16%26issue%3D201602%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nke 1 n'Afọ 2016 Ịga Chọọchị Ọ̀ Ka Na-amasị Ndị Mmadụ?